Ukuqhathaniswa koLwesibini ngeCandelo le-ACT Imvume ye-Admissions yee-Alaska iikholeji
Abafundi abacwangcise ukuya kwikholeji engama-engama-nzuzo e-Alaska baneendlela ezihlanu kuphela zokukhetha. Yonke i-Alaska Pacific University ivakaliswe ngokuvakalayo (phawula ukuba ukuvunywa okuvulekileyo akuthethi ukuba wonke umntu uyangena - uya kufuneka ukuhlangabezana neemfuno ezithile zebakala kunye nekota).
UMTHETHO I-Scores yee-Alaska iikholeji (phakathi kwama-50%)
Ikholeji yeBhayibhile yaseAlaska kuvunywa
IAlaska Pacific University - - - - - -
Yunivesithi yaseAlaska Anchorage kuvunywa
Yunivesithi yaseAlaska Fairbanks 19 26 17 25 18 26
Yunivesithi yaseAlaska kumzantsi-mpuma kuvunywa
Itheyibhile ngasentla ibonisa umgangatho we-ACT kwiminyaka engama-50% yabafundi abathweswe imatriki e-Alaska Pacific, kwaye unokuqhafaza ukuze ufumane ulwazi oluthe xaxa malunga nokwamkelwa okuvulekileyo. Ukuba ucofa ngegama le sikolo, uya kuphrofayili ngolwazi malunga neendleko, uncedo lwezemali, amazinga okugqwesa, kunye nokunye. Qaphela ukuba i-SAT ithandwa kakhulu kunomThetho we-Alaska, kodwa zonke izikolo ziya kwamkela ukuba zihlolwe.
Umthetho we-Alaska Igrafu iphelileyo ihlaziywe ngoMeyi 2015.
Njani i-Forester iqalisa umsebenzi
Zithini i-Red Stakes okanye i-Red Lines Ethetha kwiKlasi yeGalofu?
Ilahleko kwiNguqulelo yeShishino
Izintuthwane, Izinyosi, kunye ne-Wasps (Order Hymenoptera)
Iimali zemiSebenzi yoMzekelo IsiNgxaki
I-Honda Ridgeline Trucks kwi-2005 SEMA Show e Las Vegas